အင်္ဂလိပ်စာ လေ့လာလိုသူတို့အတွက် အကောင်းဆုံး ဝက်ဘ်ဆိုက်ဒ် (၃) ခု - For her Myanmar
အင်္ဂလိပ်စာ လေ့လာလိုသူတို့အတွက် အကောင်းဆုံး ဝက်ဘ်ဆိုက်ဒ် (၃) ခု
တစ်ခါပဲ ဝင်ကြည့်လိုက်ပါ… ပြန်မထွက်နိုင်ဖြစ်သွားစေရမယ်…. (တကယ်လေ့လာမယ့်သူတွေဆိုရင်ပေါ့ 😛 )
ယောင်းတို့ရေ… အင်္ဂလိပ်စာကို လေ့လာတဲ့အခါ တချို့တွေကတော့ သင်တန်းတွေမှာ သင်ယူကြသလို တချို့တွေကတော့ Self Study လို့ခေါ်တဲ့ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပဲ ရှာဖွေလေ့လာတတ်ကြပါတယ်… ဒီတစ်ခါမှာတော့ အက်ဒ်မင်က သင်တန်းတွေမတက်ဘဲ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပဲ လေ့လာချင်တယ်ဆိုတဲ့ ယောင်းလေးတို့အတွက် အင်္ဂလိပ်စာ လေ့လာဖို့ အကောင်းဆုံးသော ဝက်ဘ်ဆိုက်ဒ် (၃)ခုကို ရွေးချယ်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်… ဝက်ဘ်ဆိုက်ဒ်တွေထဲ ဝင်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင် ခေါင်းစဉ်လေးတွေကို နှိပ်ပြီး ဝင်ကြည့်လို့ ရတယ်နော် ယောင်းတို့…
၁။ BBC Learning English
အကောင်းဆုံးတကာ့ အကောင်းဆုံး လို့ဆိုရမယ့် အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာရေး ဝက်ဘ်ဆိုက်ဒ်တွေထဲက တစ်ခုပေါ့… တစ်ခုရှိတာက ဒီ BBC Learning English ဆိုတဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုက်ဒ်ဟာ ခုမှ အင်္ဂလိပ်စာကို စပြီး လေ့လာမယ့်သူတွေအတွက်တော့ အဆင်မပြေလောက်ပါဘူး.. အခြေခံ ရှိပြီးသား လူတွေအတွက်တော့ ရှယ်မှရှယ်ပေါ့… ဒါပေမဲ့ အက်ဒ်မင်တို့ ယောင်းလေးတွေက တော်ပြီးသားပဲဟာကိုနော်…ကဲ… ဒါဆို ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်ဒ်မှာ ဘာတွေ ရှိလဲဆိုတာ ကြည့်ကြရအောင်နော်…
စောစောက ပြောခဲ့သလို BBC Learning English ဟာ Intermediate နဲ့ Advanced English အတွက် ရည်ရွယ်တာမို့ BBC စတိုင်လ် ဗီဒီယိုနဲ့ ရေဒီယိုပုံစံ Clip တွေကို တွေ့ရမှာပါ.. ဒီထဲကနေ နောက်ဆုံးပေါ် အင်္ဂလိပ်စကားလုံးတွေ (ဗန်းစကားတွေပေါ့ ယောင်းတို့ရယ်)၊ စကားလုံးအတွဲအစပ်တွေနဲ့ စကားလုံးတွေကို ဘယ်လို မှန်ကန်အောင် အသံထွက်ရမယ်ဆိုတာမျိုးတွေကို လုံးဝ အသေးစိတ်ကျကျ လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အပြန်အလှန် စကားပြောပြနေတာမျိုးတော့ မရှိပေမဲ့ ဒီဗီဒီယိုတွေနဲ့ အသံဖိုင်တွေတစ်ခုချင်းစီပြီးတိုင်းမှာ သင်ယူနေသူတွေ၊ ကြည့်ရှုနားထောင်နေတဲ့သူတွေ ဘယ်လောက်နားလည်သွားလဲဆိုတာကို ဆန်းစစ်ပေးတဲ့ ပုံစံလေးတွေ (Activities) ပါဝင်တာမို့ အင်္ဂလိပ်စာ လေ့လာသူတွေအတွက် တကယ်ကောင်းတဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုက်ဒ်တစ်ခုပါပဲ ယောင်းတို့ရေ….
၂။ British Council
အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ ပတ်သက်လာပြီဆိုရင် BC ကို ချန်ခဲ့လို့ ဘယ်ရမလဲနော်… ထူးထူးခြားခြားတော့ သိပ်ပြောနေဖို့ မလိုဘူးနဲ့တူတယ်နော်.. ဘာလို့ဆို ဒီနိုင်ငံမှာလည်း BC က ရှိနေတော့လေ… အင်း ဒါပေမဲ့ သူ့ဝက်ဘ်ဆိုက်ဒ်ကိုတော့ ဝင်ကြည့်တဲ့သူ နည်းမယ်ထင်တာမို့ အက်ဒ်မင်က ဝက်ဘ်ဆိုက်ဒ်အကြောင်းတော့ ပိစိလေး ပြောပြပေးမယ်နော်…
BC ရဲ့ Learn English ဝက်ဘ်ဆိုက်ဒ်မှာ ပူတူတူးလေးတွေကစလို့ ဆယ်ကျော်သက်လေးတွေအလယ်၊ လူကြီးတွေအဆုံး လေ့လာလို့ရတဲ့ သင်ခန်းစာ အမျိုးမျိုးအတွက် Section အမျိုးမျိုး ခွဲခြားပြီး လုပ်ထားပေးတာမို့ အင်္ဂလိပ်စာ လေ့လာလိုသူတိုင်းအတွက် အသင့်လျော်ဆုံး၊ အကောင်းဆုံး ဝက်ဘ်ဆိုက်ဒ်တွေထဲက တစ်ခုပါပဲ…. Section တိုင်းမှာ လေ့ကျင့်ခန်းတွေ၊ ဗီဒီယိုတွေ၊ ဂိမ်းတွေ စသဖြင့် အမျိုးမျိုး စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းအောင် သေချာ လုပ်ထားပေးတာကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။ ဒီတော့ ယောင်းလေးက ဘယ်လို အကြောင်းအရာမျိုးကိုပဲ စိတ်ဝင်စားသည်ဖြစ်စေ၊ အင်္ဂလိပ်စာ လယ်ဗယ် ဘယ်လောက်ရှိသည်ဖြစ်စေ၊ BC ရဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုက်ဒ်ထဲမှာ ယောင်းအတွက် အဆင်ပြေနိုင်မယ့် အရာတစ်ခုခုကတော့ ရှိကိုရှိပါတယ်။ (ရှာတတ်ဖို့တော့ လိုတာပေါ့နော်.. ကိုယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့ အကြောင်းအရာကို လေ့လာရတာက ပိုပြီး စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်မလား)
ဆက်ပြောရမယ်ဆိုရင် သင်ခန်းစာ တစ်ခုပြီးတိုင်း၊ ဗီဒီယိုတစ်ခုပြီးတိုင်းမှာ ယောင်းလေးတို့ ဘယ်လောက် နားလည်လိုက်လဲဆိုတာကို ဆန်းစစ်ဖို့ လေ့ကျင့်ခန်းတွေလည်း ထည့်ထားပေးပါသေးတယ်.. နောက် သင်ခန်းစာတွေအောက်မှာ ကိုယ်ဘာတွေ သင်ယူလိုက်ရတယ်၊ ဘာတွေကိုတော့ ဘယ်လိုခံစားရတယ်ဆိုတာကို ဆွေးနွေးလို့ရမယ့် Discussion Board လည်း ရှိတယ် ယောင်းတို့ရဲ့.. အဲ ပြောဖို့ရှိသေးတာတစ်ခုက သူက ဝက်ဘ်ဆိုက်ဒ်ပဲ ရှိတာ မဟုတ်ဘူးနော်.. Mobile App တွေလည်း ရှိသေးတာမို့ ဒေါင်းလုတ်ဆွဲပြီး ဖုန်းထဲ ထည့်ထားလို့လည်း ရပါသေးတယ် ယောင်းတို့ရေ… ပိုလွယ်သွားတာပေါ့.. လိုင်းကားစီးရင်း၊ ကားစောင့်ရင်း၊ ထမင်းစားရင်း ဖွဘုတ်သုံးမယ့် အချိန်လည်း နည်းနည်းလျှော့ပြီး ဒါလေး သုံးနေရင် အချိန်တွေ ကုန်ရကျိုး နပ်တာပေါ့.. ဒါတော့ အက်ဒ်မင့်အထင်ပါလေ.. တကယ်လို့ Mobile app တွေကို ဒေါင်းလုတ်ဆွဲချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒီလင့်ခ် >>> https://learnenglish.britishcouncil.org/en/apps ထဲမှာ သွားရှာဖွေ မွှေနှောက်ပြီး ကိုယ်နဲ့ သင့်လျော်ရာ app ကို ဒေါင်းလုတ်ဆွဲနိုင်ပါတယ်ကွယ်..
ဒါကတော့ အက်ဒ်မင်အကြိုက်ဆုံး ဝက်ဘ်ဆိုက်ဒ်ပါပဲ.. မှန်တဲ့ အတိုင်း ဝန်ခံရရင် အက်ဒ်မင်ဟာ အဲ့လိုမျိုး သင်ယူလေ့လာရမှာ အင်မတန်ပျင်းတဲ့ အပျင်းအိုးလေးပါကွယ်…အဲဒီတော့ ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်ဒ်ကို အက်ဒ်မင်အကြိုက်ဆုံးလို့ ပြောနေရတဲ့ အကြောင်းရင်းကို ခန့်မှန်းလို့ ရလောက်ပြီပေါ့… ဟုတ်ပါတယ်… ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်ဒ်မှာ အင်္ဂလိပ်စာကို လေ့လာမယ်ဆိုရင် ဂိမ်းတွေ၊ ပဟေဠိတွေနဲ့ လေ့လာရတာပါ ယောင်းတို့ရေ… အက်ဒ်မင် ဘယ်လောက်ပျော်မလဲ စဉ်းစားကြည့်လေ.. ဂိမ်းလည်း ဆော့ရသေး.. စာလည်း ရသေး ဟီးဟီး… ပြီးတော့ သူက အင်္ဂလိပ်စာ တစ်ခုတည်း လေ့လာလို့ ရတာ မဟုတ်ဘူး ယောင်းတို့ရဲ့… တခြား ဘာသာစကားတွေ အများကြီးကိုလည်း လေ့လာလို့ ရသေးတယ်.. အသံထွက်တွေ ဘာတွေလည်း ချက်ချင်းလေ့ကျင့်လို့ ရပါသေးတယ်… တစ်ခုရှိတာက သူက မြန်မာလိုတော့ မပါပါဘူး… ဒီတော့ ဘာသာစကား (၂)မျိုးနဲ့ အထက် လေ့လာနေတဲ့သူတွေအတွက်ဆို ပိုပြီး သင့်လျော်တယ်ဆိုရမှာပေါ့ ယောင်းတို့ရယ်.. ဆိုကြပါစို့ ဂျပန်နဲ့ အင်္ဂလိပ်၊ မန်ဒရင်းနဲ့ အင်္ဂလိပ် စသဖြင့် တွဲပြီး လေ့လာသူတွေအတွက် ပိုပြီး အဆင်ပြေ သင့်လျော်ပါတယ်။
Related Article >>> TOEFL နှင့် IELTS ဘာတွေကွာသွားလဲ?
အဓိကအားဖြင့်တော့ ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်ဒ်မှာ သဒ္ဒါနဲ့ ဝေါဟာရတွေကို သေချာလေ့လာလို့ ရနိုင်ပါတယ်။ ဂိမ်းတွေ၊ ပဟေဠိတွေဆိုလည်း မိသားစုနဲ့ဆိုင်ရာဆို မိသားစုနဲ့ဆိုင်ရာ၊ အစားအသောက်ဆိုလည်း အစားအသောက်ဆိုင်ရာ၊ Verb to be ဖြင့်လည်း Verb to be စသဖြင့် ခွဲခြားထားပေးသေးတာမို့ ကွက်စတိပေါ့ ယောင်းတို့ရေ… ဂိမ်းဆော့ရင်လည်း လိုအပ်တဲ့ အချက်အလက်တွေ၊ ရှင်းပြချက်တွေကို တစ်ခါတည်း ထည့်သွင်းပေးထားတာမို့ ဝေါဟာရတစ်ခုကို ဘယ်လိုမျိုးတွေ သုံးနိုင်တယ်၊ သဒ္ဒါကျကျ ဘယ်လိုသုံးလို့ရတယ်ဆိုတာမျိုးပါ တစ်ခါတည်း နားလည်သွားတာမို့ ဆော့ရတာလည်း တကယ်တန်တယ်လို့ ဆိုရမှာပါ။
နောက်တစ်ခုက အက်ဒ်မင်တို့လို အပျင်းအိုးလေးတွေအတွက် ဂိမ်းဆော့သလို ပုံစံမျိုးဖြစ်နေအောင် Goal လေးတွေ ထည့်ပေးထားတာ ရှိပါသေးတယ်။ ဒါကိုတော့ ကိုယ့်ဘာသာ ချိန်လို့ ရတယ်ပေါ့နော်… ကိုယ်ဘယ်လောက် တိုးတက်လာတယ်ဆိုတဲ့အပေါ် မူတည်ပြီး သူက လယ်ဗယ်တွေ တစ်ခုပြီး တစ်ခု ပွင့်ပွင့်သွားတာမို့ လုံးဝ ဂိမ်းစစ်စစ်ကို ဆော့နေရသလို နိုင်ချင်ဇော၊ လယ်ဗယ်တက်ချင်ဇောနဲ့ စာတွေ ပိုပြီး လေ့လာဖြစ်သွားတာပေါ့လို့.. အဲ.. အဲ… သူလည်း BC လိုပဲ Mobile App လေးတွေ ရှိတယ်နော်.. ဒေါင်းလုတ်ဆွဲချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Google play မှာ Duolingo: Learn Languages Free ဆိုပြီး ရိုက်ရှာ ဒေါင်းလို့ ရပါတယ်…. မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ တရားဝင်ဒေါင်းလုတ်ဆွဲလို့ မရသေးတာမို့ လင့်ခ်မထည့်ပေးတော့ဘူးနော်..
ကဲ.. ဒီလောက်ဆို တို့ယောင်းလေးတွေလည်း ဖုန်းလေးတစ်လုံး အရင်းပြုပြီး အင်္ဂလိပ်စာကို ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်လေ့လာနိုင်ကြပြီထင်ပါတယ်.. နောက်ထပ် ဒီလို ဝက်ဘ်ဆိုက်ဒ်လေးတွေ ထပ်သိချင်သေးတယ်ဆိုလည်း Comment လေးတွေ ပေးသွားကြဦးနော်… နောက်များမှ ဆုံကြပါစို့ရဲ့… အဲ.. အဲ… ပြောဖို့မေ့သွားတာ.. အပေါ်က ဝက်ဘ်ဆိုက်ဒ်တွေ အကုန်လုံးက ပိုက်ပိုက် ပေးစရာမလိုဘူးနော်.. ဖရီးကုန်းဆင်းလို့ရတဲ့ အဲလေ ဖရီးလေ့လာလို့ရတဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုက်ဒ်တွေပါလို့စ်…
References : British Council ,BBC Learning English , Duolingo
တဈခါပဲ ဝငျကွညျ့လိုကျပါ… ပွနျမထှကျနိုငျဖွဈသှားစရေမယျ…. (တကယျလလေ့ာမယျ့သူတှဆေိုရငျပေါ့ 😛 )
ယောငျးတို့ရေ… အင်ျဂလိပျစာကို လလေ့ာတဲ့အခါ တခြို့တှကေတော့ သငျတနျးတှမှော သငျယူကွသလို တခြို့တှကေတော့ Self Study လို့ချေါတဲ့ ကိုယျကိုယျတိုငျပဲ ရှာဖှလေလေ့ာတတျကွပါတယျ… ဒီတဈခါမှာတော့ အကျဒျမငျက သငျတနျးတှမေတကျဘဲ ကိုယျကိုယျတိုငျပဲ လလေ့ာခငျြတယျဆိုတဲ့ ယောငျးလေးတို့အတှကျ အင်ျဂလိပျစာ လလေ့ာဖို့ အကောငျးဆုံးသော ဝကျဘျဆိုကျဒျ (၃)ခုကို ရှေးခယျြဖျောပွပေးလိုကျပါတယျနျော… ဝကျဘျဆိုကျဒျတှထေဲ ဝငျကွညျ့ခငျြတယျဆိုရငျ ခေါငျးစဉျလေးတှကေို နှိပျပွီး ဝငျကွညျ့လို့ ရတယျနျော ယောငျးတို့…
အကောငျးဆုံးတကာ့ အကောငျးဆုံး လို့ဆိုရမယျ့ အင်ျဂလိပျစာလလေ့ာရေး ဝကျဘျဆိုကျဒျတှထေဲက တဈခုပေါ့… တဈခုရှိတာက ဒီ BBC Learning English ဆိုတဲ့ ဝကျဘျဆိုကျဒျဟာ ခုမှ အင်ျဂလိပျစာကို စပွီး လလေ့ာမယျ့သူတှအေတှကျတော့ အဆငျမပွလေောကျပါဘူး.. အခွခေံ ရှိပွီးသား လူတှအေတှကျတော့ ရှယျမှရှယျပေါ့… ဒါပမေဲ့ အကျဒျမငျတို့ ယောငျးလေးတှကေ တျောပွီးသားပဲဟာကိုနျော…ကဲ… ဒါဆို ဒီဝကျဘျဆိုကျဒျမှာ ဘာတှေ ရှိလဲဆိုတာ ကွညျ့ကွရအောငျနျော…
စောစောက ပွောခဲ့သလို BBC Learning English ဟာ Intermediate နဲ့ Advanced English အတှကျ ရညျရှယျတာမို့ BBC စတိုငျလျ ဗီဒီယိုနဲ့ ရဒေီယိုပုံစံ Clip တှကေို တှရေ့မှာပါ.. ဒီထဲကနေ နောကျဆုံးပျေါ အင်ျဂလိပျစကားလုံးတှေ (ဗနျးစကားတှပေေါ့ ယောငျးတို့ရယျ)၊ စကားလုံးအတှဲအစပျတှနေဲ့ စကားလုံးတှကေို ဘယျလို မှနျကနျအောငျ အသံထှကျရမယျဆိုတာမြိုးတှကေို လုံးဝ အသေးစိတျကကြ လလေ့ာနိုငျပါတယျ။ တဈယောကျနဲ့တဈယောကျ အပွနျအလှနျ စကားပွောပွနတောမြိုးတော့ မရှိပမေဲ့ ဒီဗီဒီယိုတှနေဲ့ အသံဖိုငျတှတေဈခုခငျြးစီပွီးတိုငျးမှာ သငျယူနသေူတှေ၊ ကွညျ့ရှုနားထောငျနတေဲ့သူတှေ ဘယျလောကျနားလညျသှားလဲဆိုတာကို ဆနျးစဈပေးတဲ့ ပုံစံလေးတှေ (Activities) ပါဝငျတာမို့ အင်ျဂလိပျစာ လလေ့ာသူတှအေတှကျ တကယျကောငျးတဲ့ ဝကျဘျဆိုကျဒျတဈခုပါပဲ ယောငျးတို့ရေ….
အင်ျဂလိပျစာနဲ့ ပတျသကျလာပွီဆိုရငျ BC ကို ခနျြခဲ့လို့ ဘယျရမလဲနျော… ထူးထူးခွားခွားတော့ သိပျပွောနဖေို့ မလိုဘူးနဲ့တူတယျနျော.. ဘာလို့ဆို ဒီနိုငျငံမှာလညျး BC က ရှိနတေော့လေ… အငျး ဒါပမေဲ့ သူ့ဝကျဘျဆိုကျဒျကိုတော့ ဝငျကွညျ့တဲ့သူ နညျးမယျထငျတာမို့ အကျဒျမငျက ဝကျဘျဆိုကျဒျအကွောငျးတော့ ပိစိလေး ပွောပွပေးမယျနျော…
BC ရဲ့ Learn English ဝကျဘျဆိုကျဒျမှာ ပူတူတူးလေးတှကေစလို့ ဆယျကြျောသကျလေးတှအေလယျ၊ လူကွီးတှအေဆုံး လလေ့ာလို့ရတဲ့ သငျခနျးစာ အမြိုးမြိုးအတှကျ Section အမြိုးမြိုး ခှဲခွားပွီး လုပျထားပေးတာမို့ အင်ျဂလိပျစာ လလေ့ာလိုသူတိုငျးအတှကျ အသငျ့လြျောဆုံး၊ အကောငျးဆုံး ဝကျဘျဆိုကျဒျတှထေဲက တဈခုပါပဲ…. Section တိုငျးမှာ လကေ့ငျြ့ခနျးတှေ၊ ဗီဒီယိုတှေ၊ ဂိမျးတှေ စသဖွငျ့ အမြိုးမြိုး စိတျဝငျစားစရာကောငျးအောငျ သခြော လုပျထားပေးတာကိုလညျး တှရေ့ပါတယျ။ ဒီတော့ ယောငျးလေးက ဘယျလို အကွောငျးအရာမြိုးကိုပဲ စိတျဝငျစားသညျဖွဈစေ၊ အင်ျဂလိပျစာ လယျဗယျ ဘယျလောကျရှိသညျဖွဈစေ၊ BC ရဲ့ ဝကျဘျဆိုကျဒျထဲမှာ ယောငျးအတှကျ အဆငျပွနေိုငျမယျ့ အရာတဈခုခုကတော့ ရှိကိုရှိပါတယျ။ (ရှာတတျဖို့တော့ လိုတာပေါ့နျော.. ကိုယျစိတျဝငျစားတဲ့ အကွောငျးအရာကို လလေ့ာရတာက ပိုပွီး စိတျဝငျစားစရာကောငျးတယျမလား)
ဆကျပွောရမယျဆိုရငျ သငျခနျးစာ တဈခုပွီးတိုငျး၊ ဗီဒီယိုတဈခုပွီးတိုငျးမှာ ယောငျးလေးတို့ ဘယျလောကျ နားလညျလိုကျလဲဆိုတာကို ဆနျးစဈဖို့ လကေ့ငျြ့ခနျးတှလေညျး ထညျ့ထားပေးပါသေးတယျ.. နောကျ သငျခနျးစာတှအေောကျမှာ ကိုယျဘာတှေ သငျယူလိုကျရတယျ၊ ဘာတှကေိုတော့ ဘယျလိုခံစားရတယျဆိုတာကို ဆှေးနှေးလို့ရမယျ့ Discussion Board လညျး ရှိတယျ ယောငျးတို့ရဲ့.. အဲ ပွောဖို့ရှိသေးတာတဈခုက သူက ဝကျဘျဆိုကျဒျပဲ ရှိတာ မဟုတျဘူးနျော.. Mobile App တှလေညျး ရှိသေးတာမို့ ဒေါငျးလုတျဆှဲပွီး ဖုနျးထဲ ထညျ့ထားလို့လညျး ရပါသေးတယျ ယောငျးတို့ရေ… ပိုလှယျသှားတာပေါ့.. လိုငျးကားစီးရငျး၊ ကားစောငျ့ရငျး၊ ထမငျးစားရငျး ဖှဘုတျသုံးမယျ့ အခြိနျလညျး နညျးနညျးလြှော့ပွီး ဒါလေး သုံးနရေငျ အခြိနျတှေ ကုနျရကြိုး နပျတာပေါ့.. ဒါတော့ အကျဒျမငျ့အထငျပါလေ.. တကယျလို့ Mobile app တှကေို ဒေါငျးလုတျဆှဲခငျြတယျဆိုရငျတော့ ဒီလငျ့ချ >>> https://learnenglish.britishcouncil.org/en/apps ထဲမှာ သှားရှာဖှေ မှနှေောကျပွီး ကိုယျနဲ့ သငျ့လြျောရာ app ကို ဒေါငျးလုတျဆှဲနိုငျပါတယျကှယျ..
ဒါကတော့ အကျဒျမငျအကွိုကျဆုံး ဝကျဘျဆိုကျဒျပါပဲ.. မှနျတဲ့ အတိုငျး ဝနျခံရရငျ အကျဒျမငျဟာ အဲ့လိုမြိုး သငျယူလလေ့ာရမှာ အငျမတနျပငျြးတဲ့ အပငျြးအိုးလေးပါကှယျ…အဲဒီတော့ ဒီဝကျဘျဆိုကျဒျကို အကျဒျမငျအကွိုကျဆုံးလို့ ပွောနရေတဲ့ အကွောငျးရငျးကို ခနျ့မှနျးလို့ ရလောကျပွီပေါ့… ဟုတျပါတယျ… ဒီဝကျဘျဆိုကျဒျမှာ အင်ျဂလိပျစာကို လလေ့ာမယျဆိုရငျ ဂိမျးတှေ၊ ပဟဠေိတှနေဲ့ လလေ့ာရတာပါ ယောငျးတို့ရေ… အကျဒျမငျ ဘယျလောကျပြျောမလဲ စဉျးစားကွညျ့လေ.. ဂိမျးလညျး ဆော့ရသေး.. စာလညျး ရသေး ဟီးဟီး… ပွီးတော့ သူက အင်ျဂလိပျစာ တဈခုတညျး လလေ့ာလို့ ရတာ မဟုတျဘူး ယောငျးတို့ရဲ့… တခွား ဘာသာစကားတှေ အမြားကွီးကိုလညျး လလေ့ာလို့ ရသေးတယျ.. အသံထှကျတှေ ဘာတှလေညျး ခကျြခငျြးလကေ့ငျြ့လို့ ရပါသေးတယျ… တဈခုရှိတာက သူက မွနျမာလိုတော့ မပါပါဘူး… ဒီတော့ ဘာသာစကား (၂)မြိုးနဲ့ အထကျ လလေ့ာနတေဲ့သူတှအေတှကျဆို ပိုပွီး သငျ့လြျောတယျဆိုရမှာပေါ့ ယောငျးတို့ရယျ.. ဆိုကွပါစို့ ဂပြနျနဲ့ အင်ျဂလိပျ၊ မနျဒရငျးနဲ့ အင်ျဂလိပျ စသဖွငျ့ တှဲပွီး လလေ့ာသူတှအေတှကျ ပိုပွီး အဆငျပွေ သငျ့လြျောပါတယျ။
Related Article >>> TOEFL နှငျ့ IELTS ဘာတှကှောသှားလဲ?
အဓိကအားဖွငျ့တော့ ဒီဝကျဘျဆိုကျဒျမှာ သဒ်ဒါနဲ့ ဝေါဟာရတှကေို သခြောလလေ့ာလို့ ရနိုငျပါတယျ။ ဂိမျးတှေ၊ ပဟဠေိတှဆေိုလညျး မိသားစုနဲ့ဆိုငျရာဆို မိသားစုနဲ့ဆိုငျရာ၊ အစားအသောကျဆိုလညျး အစားအသောကျဆိုငျရာ၊ Verb to be ဖွငျ့လညျး Verb to be စသဖွငျ့ ခှဲခွားထားပေးသေးတာမို့ ကှကျစတိပေါ့ ယောငျးတို့ရေ… ဂိမျးဆော့ရငျလညျး လိုအပျတဲ့ အခကျြအလကျတှေ၊ ရှငျးပွခကျြတှကေို တဈခါတညျး ထညျ့သှငျးပေးထားတာမို့ ဝေါဟာရတဈခုကို ဘယျလိုမြိုးတှေ သုံးနိုငျတယျ၊ သဒ်ဒါကကြ ဘယျလိုသုံးလို့ရတယျဆိုတာမြိုးပါ တဈခါတညျး နားလညျသှားတာမို့ ဆော့ရတာလညျး တကယျတနျတယျလို့ ဆိုရမှာပါ။
နောကျတဈခုက အကျဒျမငျတို့လို အပငျြးအိုးလေးတှအေတှကျ ဂိမျးဆော့သလို ပုံစံမြိုးဖွဈနအေောငျ Goal လေးတှေ ထညျ့ပေးထားတာ ရှိပါသေးတယျ။ ဒါကိုတော့ ကိုယျ့ဘာသာ ခြိနျလို့ ရတယျပေါ့နျော… ကိုယျဘယျလောကျ တိုးတကျလာတယျဆိုတဲ့အပျေါ မူတညျပွီး သူက လယျဗယျတှေ တဈခုပွီး တဈခု ပှငျ့ပှငျ့သှားတာမို့ လုံးဝ ဂိမျးစဈစဈကို ဆော့နရေသလို နိုငျခငျြဇော၊ လယျဗယျတကျခငျြဇောနဲ့ စာတှေ ပိုပွီး လလေ့ာဖွဈသှားတာပေါ့လို့.. အဲ.. အဲ… သူလညျး BC လိုပဲ Mobile App လေးတှေ ရှိတယျနျော.. ဒေါငျးလုတျဆှဲခငျြတယျဆိုရငျတော့ Google play မှာ Duolingo: Learn Languages Free ဆိုပွီး ရိုကျရှာ ဒေါငျးလို့ ရပါတယျ…. မွနျမာနိုငျငံမှာတော့ တရားဝငျဒေါငျးလုတျဆှဲလို့ မရသေးတာမို့ လငျ့ချမထညျ့ပေးတော့ဘူးနျော..
ကဲ.. ဒီလောကျဆို တို့ယောငျးလေးတှလေညျး ဖုနျးလေးတဈလုံး အရငျးပွုပွီး အင်ျဂလိပျစာကို ပြျောပြျောရှငျရှငျလလေ့ာနိုငျကွပွီထငျပါတယျ.. နောကျထပျ ဒီလို ဝကျဘျဆိုကျဒျလေးတှေ ထပျသိခငျြသေးတယျဆိုလညျး Comment လေးတှေ ပေးသှားကွဦးနျော… နောကျမြားမှ ဆုံကွပါစို့ရဲ့… အဲ.. အဲ… ပွောဖို့မသှေ့ားတာ.. အပျေါက ဝကျဘျဆိုကျဒျတှေ အကုနျလုံးက ပိုကျပိုကျ ပေးစရာမလိုဘူးနျော.. ဖရီးကုနျးဆငျးလို့ရတဲ့ အဲလေ ဖရီးလလေ့ာလို့ရတဲ့ ဝကျဘျဆိုကျဒျတှပေါလို့ဈ…
Tags: Fun, Knowledge, Learn, Sunday English, Websites
For Her Myanmar ရဲ့ "လိုအပ်နေတဲ့သူတွေအတွက် လက်တစ်စုံ ကမ်းပေးလိုက်ကြရအောင်" အစီအစဉ်မှာ ဘယ်သူတွေကို သွားရောက် လှူဒါန်းဖြစ်ခဲ့လဲ
လွဲမှားတဲ့ အလှစံနှုန်းတစ်ခုအောက်မှာ သားကောင်ဖြစ်ခဲ့ရသူ အဘွားအို
Wathun July 1, 2018